सुरक्षित यात्रा घर छ in English. सुरक्षित यात्रा घर छ Meaning and Nepali to English Translation
Home>Words that start with H>Haveasafe journey home>सुरक्षित यात्रा घर छ (Nepali to English translation)
What does सुरक्षित यात्रा घर छ mean in English? If you want to learn सुरक्षित यात्रा घर छ in English, you will find the translation here, along with other translations from Nepali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is सुरक्षित यात्रा घर छ meaning in English:
कसरी लामो यो न्यूयोर्क प्राप्त ले?
तपाईं के समय प्राप्त गर्नुभयो?
म एक धेरै कमजोर संकेत पाउनुभएको छ
म सात बजे एक जागा-अप कल हुन सक्छ?
मुर्ख हुन छैन